Ambositra – Hetsika Tanamaro : Namaly ny antso ny fikambanana vehivavy 08 marsa tamin’ny fametrahana asa maharitra – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → avril → 1 → Ambositra – Hetsika Tanamaro : Namaly ny antso ny fikambanana vehivavy 08 marsa tamin’ny fametrahana asa maharitra
Ambositra – Hetsika Tanamaro : Namaly ny antso ny fikambanana vehivavy 08 marsa tamin’ny fametrahana asa maharitra
Redaction Midi Madagasikara 1 avril 2019 0 Commentaire
Toy ny renivohitrin’ny faritra rehetra sy ny tanan-dehibe rehetra manerana ny Nosy, dia namaly ny antso nataon’ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina ny fikambanana vehivavy 08 marsa eto Ambositra sy ny vokovokomena amin’ny fandraisana anjara feno amin’ny hetsika “Tanamaro”.
Hetsika izay mifantoka indrindra tamin’ny fanadiovana an’I Antamponivinany, toerana an’isany sangany eto an-drenivohitrin’I Amoron’I Mania. Noho izy misy ny ankamaroan’ny sampandraharaham-panjakana sy toerana fialam-boly ihany koa ho fanatsarana ny tontolo iainana ihany
Ho an’ny fikambanana vehivavy 08 marsa manokana, dia napetraka ihany koa ny ady fototra fanorenana ny “WC public”, arakin’ny programan’asa napetrakin’ I Fonendrazana Haingo Elisette, filohan’ny fikambanana vehivavy 08 marsa Ambositra. Marihina etoana fa angady sy vy nahitana izao hetsika izao dia avy amin’ny filohan’ny 08 marsa mivady. Izany no natao ho fandraisana anjara maharitra amin’ny fanatsarana ny tontolo iainana. Arakin’ny fampanantenana napetrakin’ny filoha ny 08 marsa, dia mbola hitohy ny asa ho fanatsarana ny mpiara-belona.
Tonga nanotrona izao hetsika izao, ireo manampahefana eto an-toerana sy ireo olona liam-pivoarana tsara sitrapo.